AKHRISO: Beesha Caalamka oo baaq u dirtay Xildhibaanada BJFS “Dalka u doora Madaxweyne Tayo leh” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
AKHRISO: Beesha Caalamka oo baaq u dirtay Xildhibaanada BJFS “Dalka u doora Madaxweyne Tayo leh”
May 14, 2022 Xuseen 11
War-saxaafadeed kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa loogu baaqay Xildhibaanada labada Gole ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS inay dalka u dooraan maalinta berri ah Madaxweyne leh siyaasad iyo Tayo hoggaamineed oo hormarinaya nabadda, xasiloonida iyo dowladnimada Soomaaliya.
Hoos ka Akhriso War-saxaafadeedka kasoo baxay Beesha Caalamka.
Iyadoo la joogo habeenka ka horreeya doorashada madaxweynaha Soomaaliya, ayaa, Saaxiibada Beesha Caalamku waxay ugu baaqayaan dhammaan xubnaha Baarlamaanka inay waajibaadkooda dastuuriga ah u gutaan si ay ku jirto danta dalka.
Waxaan ku boorinaynaa Xildhibaanada inay ku codeeyaan damiirkooda iyagoo dooranaya musharaxa ay rumeysan yihiin inuu la imanayo siyaasadda iyo tayada hogaamineed ee lagu hormarinayo nabad, xasillooni, barwaaqo, iyo dowladnimo suuban sanadaha soo socda.
*Hawlgalka Kalaguurka Midowga Afrika ee Soomaaliya (ATMIS), Canada, Denmark, Masar, Itoobiya, Midowga Yurub (EU), Finland, Urur-Goboleedka (IGAD), Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Ururka Jaamacadda Carabta (LAS), Norway, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka (OIC), Qadar, Ruushka, Suudaan, Iswiidhan, Iswisarland, Turkiga, Uganda, Isutagga Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Midowday ee Britain, Dowladda Maraykanka iyo Qaramada Midoobay.
Beesha calaamka waa DAWACO talo siinayso Maqal ide kuna dhahayso waa in aad cabtaa caano ama cuntaa coows badan oo fiican si aad iigu cayiisho.
Baaqa waxaa kasokeeya in kuwa rashaxan uu kujiro nin tayo iyo qiyam leh.
Ma mooddaa Qadar iyo Turkiga mooyiye inay waddamadaas kale aqbali lahaayeen oo kufarxi lahaayeen inuu waddani dhab ahi Soomaaliya madaxweyne ka noqdo?
Ogaanshaha in aanu tuugada haddeer rashaxan kujirin waddani xalaal ah ee iyaga iyo damacoodaba halis ku noqon doona ayaa hadaaqan munaafaqadeysan kasoo yeersiiyay.
Yaa se eeddeeda xambaarsan?
Qalbi Dhagax oo ku dhawaaqay in Farmaajo jariimooyiinka uu gaystay lagula
xisaabtamo oo maxkamad la horkeeno.
Haduu deni madaxweyne noqdo hargeisa iskaga huleel sool iyo sanaag waxba kuuma yaalaan
Armuu Farmaajo kuu dhaamay
Farmaajo iyo qalbi dhagaxna waa isku tol
Adigu se jabaatu uhaajir.
Hadaba warkaan ka soo yeeray beesha 6aad waxaan u arkaa farmaajo doorta oo nin dhaama laguma hayo Musharixiinta 40ga gaaraya ee utaagan xilka waddanka
Warka beesha caalamka si fiican haaloo dhuuxu
“Waxaan ku boorinaynaa Xildhibaanada inay ku codeeyaan damiirkooda iyagoo dooranaya musharaxa ay rumeysan yihiin inuu la imanayo siyaasadda iyo tayada hogaamineed ee lagu hormarinayo nabad, xasillooni, barwaaqo, iyo dowladnimo suuban sanadaha soo socda”
very funny abaayo! Deni 3 iyo dheeraad ayuu madaxweyne ka yahay Puntland.
Weligaa ma aragtay, ficil dagaal oo uu qaado een, isago Somaliland afka
uga hanjabaya ama hadal xanaf leha u diraya? Jawaabtu waa maya!
Markaa Xamar markuu tago maxaa u soo kordhaya? ma ciidamo Hawiye &
Eelay ayuu soo kaxaysan?kkk kkk kkk
Taada hadaan kuu raaco oo Deni madaxweyne noqdo kuna kaco Somaliland
fecilo ku lidi ah, anaga halkaas ayaabay noogu badinaysaa oo Garoowe
ayaanu markasta qabsanaynaa.kkk kkk kkk
Waxaadan ogeyn somaliland wax ka liita aanu jirin oo waxaa la awoodaa madaama badda iyi cirka ay Somalia xukunto waxaa la idinku soo rogaayaa cunaqabateyn shaqsi iyo mid ganacsi idinkoo aan koofur aysan la idiinla dagaalamin kkkk wuxuu deni idinku qasbi karaa in madaxdiina reer habraha aay xabsi guri ku noqdaan somaliland shacabkiinuna ay saf usoo galaan garoowe cidii baxid rabta iyo cidii cunto rabta kkkk
Ee waxaad ka ducaysataan Doqon deni in uusan illaah ul ama xukun idiinku dhiibin kkkkkk
Maxaad tidhi beesha lixaad ayaa Farmaajo rabta????????? Waxaan u
malaynayaa inaad 5 sano ee ina dhaaftay ku noolayd godadka Tora Bora
aduunkana waxa ka dhacayna warba ku hayn!
villa Somalia hadey tooro boora kuula tahay 40 musharax ma usoo tartanteen
Villa Somalia ma, ahan aqoonsi raadis kkkk
Mida kale warka beesha caalamka warkoodi wuxuu kuula muuqday
Madaama aad mucaarad tahay kkkk aniguna waxaan u arkay mid ay qasab ku yihiin oo ah
KU QABATAY IYO QADDAR ALLE WAA LA QAATAA KKKkkk
Waxba ma ogid e, Saciid Dani iyo Muuse Biixi waa xidid kun jeer Farmaajo iskaga dhow. ‘Somaliland’ iyo Puntlandna aad ayay iskugu dhowyihiin marka ay noqoto siyaasadda dalka, hiddaha, iyo dhaqanka.
Sidaas ajligeed, Dani iyo Farmaajo waxaa ‘Somaliland’ halis xun ku ah Farmaajo, waana sababta ay Isaaqu sida xooggan uugu ol’olaynayaan inuu Dani kusoo baxo “doorashadan” iyada ah. In tujaarta iyo maamulka SNM hanti badan ku bixinayaan ol’olaha Dani iyo murashaxiinta Hawiye ee ugu firfircoon shaki kumajiro.
Labo qorshaba Deni waa laga leeyahay 1- Farmaajo maadaama u nin adag oo Jabhadihii ama koonfurta ama waqooyiga Somalia ha joogaane naftiiba haysa oo askariga Muusaa iyo Deni qurux waa ka baqayaan Farmaajo. 2- HAWIYE wuxuu is leeyahay Deni waa ka tuuran kartaan oo xigmad badan kuma tuhmayaan.